IDiploma - Isazi sokwakhiwa kweBIM - iGeofumadas
IDiploma - Isazi Sokwakhiwa KweBIM
NgoFebhuwari, 2021 Amadiploma e-AulaGEO
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni wokwakhiwa kwesakhiwo, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Kanjalo nakulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuhlela ukwakheka kwemijikelezo ehlukene yokuklama, ukuhlaziywa nokuhlelwa kwemiphumela kwezinye izigaba zenqubo.
Dala amakhono wokwakhiwa, wokuhlaziywa, nokuhlanganiswa kwamamodeli wesakhiwo. Lezi zifundo zifaka ukufundwa kweRevit, isoftware esetshenziswa kakhulu emkhakheni wezingqalasizinda zeBIM; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi ulwazi olusebenzisana ngawo kwezinye izigaba zenqubo efana neNavisWorks ne-InfraWorks. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi imojula yomqondo yokuqonda wonke umjikelezo wokuphathwa kwengqalasizinda ngaphansi kwendlela ye-BIM.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «I-BIM Structural Expert Diploma»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Inkambo yamaphrojekthi wesakhiwo (Isakhiwo se-Revit + Robot + Steel)
Funda ukusebenzisa Ukuvuselela, Ukuhlaziywa Kwesakhiwo Samarobhothi ne-Advance Insimbi ekwakhiweni kwezakhiwo. Dweba, dizayina nedokhumenti ...
Idizayini Yensimbi Ethuthukile
Funda ukwakheka kwesakhiwo usebenzisa isoftware ye-Advanced Steel Design. Dala isakhiwo esiseSisekelo esiphelele, amakholomu wesakhiwo Ohlaka, Imininingwane Ukuhlelwa Kwendlela ...
Thumela Previous«Langaphambilini Izinzwa Remote - Special of the 6th. Uhlelo lwe-TwinGeo
Post Next KUNGABONIWE: ipulatifomu entsha yokuphathwa kwedatha yendawoOkulandelayo »
I-Digital Twin Course: Ifilosofi yenguquko entsha yedijithali
Ukuqamba ngakunye kwaba nabalandeli bayo okwathi uma kusetshenziswa kwaguqula izimboni ezahlukahlukene. I-PC iguqule indlela esishayela ngayo ...